Konsobstansiasiona - Wikipedia
Ny konsobstansiasiona, araka ny fampianaram-pinoana loterana, dia ny fitehirizan'ny mofo sy ny divay ny maha-izy-azy nefa miara-mikambana amin'ny maha-izy-azy ny tena sy ny ran'i Jesosy Kristy. Izany fampianarana izany, izay nofaritan'i William of Ockham (frantsay: Guillaume d'Occam) na i Duns Scots, dia noraisin'i Martin Lotera tamin'ny taona 1520. Avy amin'ny teny latina hoe consubstatiatio io teny io. Izany dia midika fa miaraka amin'ny mpino amin'ny fotoana ankalazana ny eokaristia (na fanasan'ny Tompo) i Kristy. Ny mpianatr'i Lotera atao hoe Melanchton anefa no tena nampiasa io teny hoe consubstantiatio io na dia efa tao amin'ny soratr'i Lotera ny zavatra tiana holazaina amin'izany.
I Martin Lotera, sary nataon'i Lucas Cranach.
Misy itoviany amin'ny fampianarana momba ny transsobstansiasiona (na fiovam-pisia-maha-izy) ny konsobstansiasiona nefa misy zavatra ifanoherany aminy. Ireo hevitra roa ireo dia samy naorina amin' ny fampianaran' ny filozôfa Aristoty izay milaza fa ny raha dia foronin' ny singa tsy mifampiankina, izay mety ho tsapan' ny fitaovam-pandrenesana, sy fisia-maha-izy (sobstansa) izay tsy tsapa afa-tsy amin'ny alalan'ny fanahy sady mamorona ny fisiana tena izy. Ny fampianarana ny transsobstansiasiona sy ny konsobstansiasiona dia samy manaiky fa ao amin'ny eokaristia dia tsy miova ny singa roa, dia ny mofo sy ny divay. Mifanohitra amin'ny fampianarana ny amin'ny transsobstansiasiona anefa ny konsobstansiansiona izay manambara fa ny maha-izy (sobstansan') ny mofo sy ny divay dia tsy miova koa, ny tenan'i Kristy izay misy amin' ny toerana rehetra dia miara-misy "ao sy miaraka ary amin'ny alalan'ny" maha-izy (sobstansan') ny mofo, ary misy "ao sy miaraka ary amin'ny alalan'ny" divay ny ran'i Kristy, noho ny herin' ny tenin' Andriamanitra.
Oharin'i Lotera amin' ny vy atao ao anaty afo ny konsobstansiasiona: ny vy sy ny afo dia miray ao amin'ny vy nohafanaina, nefa ireo zavatra roa ireo dia tsy miova.
Nanohitra io fiheveran'i Lotera sy ny an'ny Katolika io i Zwingli izay milaza fa ny eokaristia dia ahatsiarovana eo amin'ny fivorian'ny mpino ny sakafo farany niarahan'i Jesosy amin'ny mpianany izay mampahatsiahy ny soa sy ny fahasoavana rehetra nomen' Andriamanitra antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanany. Manambara koa i Zwingli fa i Kristy dia tsy ao anatin'ny mofo sy ny divay ara-batana fa ao amin'ny fo sy ny fanahy ary ny fiainan'izay miara-mivavaka ka mifampizara ny mofo sy ny divay.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Konsobstansiasiona&oldid=980258"
Voaova farany tamin'ny 29 Janoary 2020 amin'ny 17:17 ity pejy ity.